भारतले कब्जा गरेको जमिन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्नुपर्छ: वेदुराम भुसाल | छलफल
भारतले कब्जा गरेको जमिन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्नुपर्छ: वेदुराम भुसाल
वेदुराम भुसाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । भूमिगत राजनीति गरेर आउनु भएका भुसाल पुराना एवम् अनुभवी नेता पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव छोड्न सक्ने नेता भुसाल पार्टीका ईमानदार एवम् क्रियाशील नेतामा पर्नुहुन्छ । लेखकको रुपमा समेत चिनिने भुसाल भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोमा कडा टिप्पणी गर्दै नेपालको भूमि भारतले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
वेदुराम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमित भएको छ यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, नापनक्सा र लालमोहरको आधारमा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरापूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अहिले भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सालाई परिवर्तन गर्नका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट समेत पहल गरी नक्सा सच्याउनु पर्दछ र यो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ ।
यति संवेदनशील विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन, सीमा मिचिएको चार दिनपछिमात्र विज्ञप्ति निकाल्यो, देशको सीमा रक्षा गर्ने कुरामा चुक्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलै भए पनि भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपाललाई मान्य छैन भनेर विज्ञप्ति त जारी ग¥यो तर त्यो एक त तपाईंले भनेझैँ ढिला आयो अर्को त बेनामे आयो । देशको सीमा मिचिएको त्यस्तो संवेदनशील विषयमा विना नामको हल्का विज्ञप्ति जारी गर्नु राम्रो होइन । त्यो स्टेटमेण्ट नामसहित आधिकारिक तहबाट व्यवस्थित रूपमा आउनु पर्दथ्यो । त्यतिमात्र होइन, यो विषयमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर भए पनि आधिकारिक रूपमै भारत सरकारसँग पत्रचार गरेर तत्काल सल्टाउनु पर्छ । त्यसका लागि अलि सशक्त रूपमै सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद धेरै पहिलेदेखिकै हो, समयमै सल्टाउन नसक्नु नेपाल सरकारकै कमजोरी होइन र ?
हो, सीमा विवाद अहिलेदेखिको होइन, एक ठाउँमा मात्रै छैन, यो समस्या धेरै पहिलेदेखिको हो र धेरै ठाउँमा छ । कालापानी, सुस्ता, महेशपुरलगायत थुप्रै ठाउँमा छ । जुन अहिलेको समस्या होइन, यो पहिलेदेखिकै हो । यी ठाउँहरूमा भारतले पहिलेदेखि नै कब्जा जमाएको थियो, हाम्रो जग्गा अतिक्रमण गरीरहेकै थियो, कति सीमास्तम्भ गायब भएकै थिए । यो गरेको अहिले आएर होइन । तर, भारतले हालै जुन राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो, त्यसमा भारत सरकारले नेपालसँग छलफल गरेर नपालको भूभाग नमिचिने गरी गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगरी एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभाग समेत आफ्नोमा पारेर सार्वजनिक गरेका कारण यो समस्या आएको हो । यसर्थ यो सरकारको कमजोरीभन्दा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको छ । यसमा सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग वार्ता गरेर कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै माध्यमबाट समस्याको हल गर्नु पर्दछ ।
महाकाली नदी साझा हो, पानी आधाआधा हो’ यस्ता नारा अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले लगाउँथे । उनीहरू नेपालको झण्डा बोकेर सीमा विवादित ठाउँसम्म पुगे, भाषण गरे तर, आज त्यही महाकालीलाई भारतले आफ्नो भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ तर पार्टी र सरकारलाई चार दिनसम्म थाहा छैन । यसो हुनुको कारण के होला ?
होइन, पार्टी र सरकारलाई थाहा नभएको, गम्भीर ढंगले नलिएको चाहिँ होइन । यो विषयलाई पार्टीले पहिले पनि उठाइरहेकै थियो,अहिले पनि उठाइरहेकै छ । भारतीय नेताहरूदेखि भारत सरकारसँग समेत हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बेग्लै रूपमा र सरकारको तर्फबाट बेग्लै रूपमा कुरा राखिरहेकै छ तर हाम्रो तर्फबाट पहल हुृँदाहुँदै समस्या नटुंगिएको मात्रै हो । सरकारले विभिन्न तरिकाले कूटनीतिक रूपमा कुरा गरी नै रहेको थियो यस विषयमा तर भारतले जसरी यो विषयलाई बाहिर ल्यायो यो तरिका ठीक भएन । उसले यो विषयलाई अब वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ ।
सीमा विवाद पहिल्यैदेखि हल भएका छैनन् अहिले पनि झन् गम्भीर समस्या देखियो यो कसरी हल होला त ?
नेपाल र भारत सरकारका बीचमा कूटनीतिक रूपमा कुरा गरेर आवश्यक पर्छ भने राजनीतिक वार्ता गरेर भए पनि यो समस्या हल गर्नुपर्छ । यो पहिलेदेखिकै समस्या हो अहिले सिर्जित समस्या होइन, आउनमात्र अहिले आएको हो । यस विषयमा थुप्रै समस्याहरू छन्, छलफल बहस गर्ने हाम्रा संयन्त्रहरू छन्, यसकै लागि बनेका डिप्लोमेसी समूह तथा कार्यदलहरू छन् र यिनीहरूले सीमा समस्या समाधानका विषयमा नयाँ ढंगले काम पनि गरिरहेका छन् । सरकार सरकारका बीचमा पनि सीमाका विषयमा कुरा भई नै रहेका हुन्छन् तर यो जसरी आउनु पर्ने हो त्यसरी नआउँदा र अर्कै ढंगले आउँदा समस्या भएको हो । तर, यसलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्छ । यो गर्न ढिला भएकै हो अब ढिला हुनु हुँदैन समस्या समाधान हुन्छ, गर्नुपर्छ ।
यो हिजोदेखिकै समस्या हो समाधान भएको छैन, भारतले टेरेको छैन अब टेरिहाल्छ भन्ने त ग्यारेण्टी छैन, टेरेन समाधान भएन भने के होला ?
होइन, पहिले त भारतसँग कूटनीतिक वा राजनीतिक रूपमा कुरा गर्नुप¥यो नि । कुरै नगरी वार्ता नै नगरी यसो होला, यसो नहोला भनेर अन्दाज गर्नु राम्रो हुँदैन र यो अन्दाज गर्ने कुरा पनि होइन । दुई देशबीचमा कुरा हुनु प¥यो । यो यस्तो, यो यस्तो भनेर कुरा गर्नुप¥यो । त्यसो गर्दा भएन भने त्यसको समाधान खोज्ने अन्य संस्था निकाय वा फोरमहरू होलान् त्यहाँ पनि जानु प¥यो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, न्यायलय र फोरमहरू छन् त्यहाँ कुरा राख्नु प¥यो । यी सबै ठाउँ त छन् नि । तर, पहिले त वान टु वान वार्ता भारतसँगै गर्नु प¥यो । मिल्यो भने मिलिहाल्यो भइगयो भएन भने त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । आफ्नो देशको सीमा मिँचिदा यो भएन त्यो भएन भनेर बस्ने कुरा हुँदैन । पहल, प्रयत्न गरिहाल्नु पर्छ ।
सरकारले जुन धारणा सार्वजनिक ग¥यो त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन, त्यो सशक्त छैन, यस्तो तरिकाले समस्या समाधान हुँदैन भन्न थालेका छन् नि प्रतिक्रिया दिने विज्ञहरूले ?
योचाहिँ सही हो किनकी पहिलो कुरा त यस्तो विषयमा जति छिटो र सशक्त ढंगले जानुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । अर्को कुरा यस्तो संवेदनशील विषयमा जस्तो खालको आधिकारिक विज्ञप्ति आउनुपर्ने थियो, त्यस्तो खालको नआएर बेनामे र हल्का विज्ञप्ति आयो योचाहिँ राम्रो होइन, यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आधिकारिक व्यक्तिको नामबाट वा भारतले सँधैभरि प्रवक्ताबाट विज्ञप्ति जारी गर्छ हाम्रोमा पनि सरकारकै प्रवक्ताबाट विज्ञप्ति आउनुपर्ने थियो त्यसरी नआउँदा यसमा कमजोरी देखियो कमजोरी भएको पनि छ यसमा भोलिका दिनलाई हेरेर पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो राम्रो कुरा हो । राष्ट्रियताको विषयमा सबैसँग छलफल र परामर्श गरेर नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलको एउटै धारणा बनाएर जाँदा समस्याको हल गर्न सहज हुन्छ । यो विषयलाई अन्य दलहरूले पनि गम्भीरताको साथ नेपालमाथि अन्याय गरेको, थिचोमिचो गरेको रूपमा लिएको र सबैले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पनि सबै पार्टीको समान धारणा बनाएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा आफ्नो समस्या समाधानको लागि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु राम्रो कुरा हो । यसले समस्या समाधानमा मद्दत गर्छ । सरकारले गरेको यो काम राम्रो हो । फेरि यो विषय भनेको सरकारको मात्र पनि होइन, सबै नेपालीको हो । त्यसैले यस्तो विषयमा सबैसँग छलफल गर्नु सबैको एउटै धाराणा बनाउनु राम्रो कुरा हो ।
यसको मतलब समस्या समाधान हुन्छ, निकास निस्किन्छ ?
होइन, निकास भनेको चाहिँ बेग्लै कुरा हो । यो दुई देशबीचको पुरानो साझा समस्या भएकोले तत्कालै निकास निस्किहाल्ने, हाम्रो मात्र पहल प्रयत्नले, हाम्रो मात्र एकताले निकास निस्कने होइन । यो दुवै देशको साझा प्रयत्नबाट, कूटनीतिक वार्ताबाट नै समस्याको समाधान र निकास निस्किने हो । तर, यस्तो विषयमा सबैको धारणा समान बनाएर सरकार अगाडि बढ्दा र भारत सरकारसँग कुरा गर्दा निकास निकाल्न र समस्या समाधानमा सहजता हुन्छ ।
यो विषयमा सबैको सहयोग हुने, समान धारणा हुने देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ किनकी सीमा मिचिएको विषयमा सबैले विरोध नै गरिरहेका छन्, नेपालको सीमा मिचिएको भनेका छन्, सबै राजनीतिक दल मिलेका छन् । यसले गर्दा यस विषयमा सबैको सहयोग नै हुने र सबैको समान धारणा नै हुने स्पष्ट देखिएको छ ।
तर केही केहीले त यो विषयमा सरकारको कमजोरी भएको भनिरहेका छन् नि ?
सरकारले जुन ढंगले यसलाई लिनुपर्ने हो त्यसमा केही कमजोरी भयो भनेका छन् तर भारतले गरेको थिचोमिचोका सन्दर्भमा विरोध त गरी नै रहेका छन् नि ।
पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ नि ?
पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति भारतले गरेको अन्यायपूर्ण एकतर्फी निर्णयमै केन्द्रित भएको छ, समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको छ । यसमा सरकारले समस्या समाधान गर्न लागिरहेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसबाहेक केही समयअगाडि अघिल्लो सरकारले गलत ढंगले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख यो सरकारले हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेको छ । यो राम्रै कुरा भएको छ । असंवैधानिक ढंगबाट देउवा सरकारले गरेका कामलाई यो सरकारले सच्याएको छ । केही समयअगाडि सरकारले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याएर दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको छ, चीनको सहयोग लिएर मुलुकको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण काम गरेको छ, विकास निर्माणका काम पनि राम्रैसँगले अगाडि बढाइरहेको छ । यसर्थ सरकारले राम्रै काम गरिरहेको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
नेकपाको आन्तरिक राजनीति कस्तो छ नि ?
यसमा चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भावना मुखरित हुन सकेको छैन किनकी पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेको छैन, पार्टीका जनवर्गीय संगठनको एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, राष्ट्रिय परिषद्, विभागलगायत थुप्रै कामहरू सम्पन्न गर्न बाँकी नै छ । यसले पार्टीलाई समस्या पारेको छ, नेता कार्यकर्तामा निरासा छाएको छ, सरकारका कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन समस्या पारेको छ । यसर्थ यी सबै कुरालाई पार्टीको मूल नेतृत्वले चाँडो टुंग्याउनु पर्छ ।